Alakamisy 07 Martsa 2019. – FJKM
Alakamisy 07 Martsa 2019.
1 Mpanjaka 9.1-9
Taorian’ny vavaka nataon’i Solomona dia tonga ny valimbavaka. »Mpihaino vavaka » tokoa manko ny Andriamanintsika (Sal 65.2) . Minoa izany dia mazotoa mivavaka . Inona avy àry no valitenin’ny Tompo ?
1- Fitsofan-drano ny trano natao (and3). Hoy ny Tompo :« Efa nohamasiniko ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin’ity mandrakariva ny masoko sy ny foko » . Fatratra izany ary ho tsapantsika amin’ny trano fiangonana rehetra anie izany .
2-Fanamafisina ny finoan’i Solomona (and4-5). Naverin’ny Tompo taminy indray izay takiny aminy : »hanao araka izay rehetra nandidiako anao ary hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko« . Tsy misy finoana marina ivelan’ny fanarahana ny Tenin’ Andriamanitta sy ny fankatoavana izany . Fa raha mbola mitoetra amin’ny teniny isika dia mitoetra ao amin’ny fitahiana.
3-Fampitandremana ny amin’ny fivadihana (and 6-9). Amin’ny fomba mahitsy sy hentitra no anambaran’ny Tompo fa raha alaim-panahy hiala Aminy ny Israely dia hofongorany . Ary ny mampalahelo tsy latsaka noho izany , ity trano lehibe tsara be vao nitokanana ity horavan’ny Tompo ho fandatsan’ny jentilisa. Ny tohin’ny tantara indrisy dia nampiseho fa tsy nahatandrina izany izy ireo ka voa.